UK Zvino Inosimudza Rwendo Rwokuchengetedza Kudzivirira Zvisiri-Zvakakosha Kufamba kuenda kuJamaica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » UK Zvino Inosimudza Rwendo Rwokuchengetedza Kudzivirira Zvisiri-Zvakakosha Kufamba kuenda kuJamaica
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett akagamuchira nhau kuti Hurumende yeUK yakasimudza kuraira kwayo pamusoro pezvese zvisina kukosha kufamba kuenda kuJamaica.
Kubva pane kuongororwa kwenjodzi dzazvino dzakabatana neCOVID-19, iyo UK yakabvisa zvirambidzo pakufamba kuenda kuJamaica.
Musika weUK wakakosha muJamaica, saka nyika inomirira nemoyo wese kugamuchira vaenzi vanobva kuUK zvakare.
Jamaica's Tourism Resilient Corridors anga achishanda kwazvo, uye nyika inoda kuti vafambi vanzwe vakachengeteka uye vaine chivimbo pavanoshanya.
Kubudirira uku kunouya mushure mekunge UK yekune dzimwe nyika, Commonwealth & Development Office, yaburitsa zvakatangira nhasi, kubvisa COVID-19-zvine chekuita nemitemo zvinoenderana nekuongororwa kwazvino kwenjodzi dzakabatana nedenda iri.
Tichifunga nezve chiziviso ichi, TUI, kambani hombe yepasirese yekushanya, iri kutarisirwa kutanga nendege kuenda kuchitsuwa ichi mwedzi uno, mushure mekuzvimisa muna Nyamavhuvhu nekuda kwezano reHurumende yeUK kune vagari vanopesana nekufamba-kusakosha kuchitsuwa nekuda kwe COVID -19 kutyisidzira.
Mukugamuchira nhau Gurukota Bartlett, vakacherekedza kuti "ichapa kukurudzira kunodiwa kune chikamu chekushanya uye pasina mubvunzo ichaita kubatsira hupfumi. "
“Chiziviso chanhasi chiitiko chikuru che Jamaica indasitiri yekushanya. Kwatiri muJamaica, musika weUK wakakosha, uye nekudaro tinotarisira nemoyo wese zvakare kugamuchira vashanyi kubva kuUK kuenda kwatiri kuenda. Chirevo ichi chinobatsira kupa mafuta vanosvika kubva mumusika iwoyo uye kubatsira kusimudzira chikamu chedu chekushanya pamwe nehupfumi hweJamaican, ”akadaro.
"TUI nendege nemabasa ekushanya anozotangazve, chinova chiziviso chinogamuchirwa nevazhinji vedu vanobatana zvikuru vanovimba zvakanyanya neboka guru iri repasirese, rinova ndiro rinotakura vatashanyi vekuUK kuenda kuJamaica," akadaro Bartlett.
“Ndinoda kuvimbisa vashanyi vedu vanobva kuUK, kuti Jamaica inzvimbo yakachengeteka zvikuru. Yedu Tourism Resilient Corridors ave achishanda zvakanyanya uye aona yakaderera kwazvo hutachiona huwandu. Yedu yepamusoro kukosha yaive uye ichiri kuita kuti vafambi vavimbe. "Tinoda kuti vafambi vedu vanzwe vakachengeteka uye vaine chivimbo pakutishanyira uye kuti vawanewo chiitiko chisingakanganwike," akawedzera.
TUI ndiro rinotungamira boka revashanyi. Iyo yakafutisa portfolio yakaunganidzwa pasi pemaambura emuBoka ine vafambisi vane simba, mamwe ma1,600 mafambiro ekufambisa uye anotungamira epamhepo masosi, ndege shanu dzine dzakatenderedza 150 ndege, angangoita mazana mana emahotera, angangoita gumi neshanu eruzivha uye mazhinji mamiririri anouya munzvimbo dzese dzakakura dzezororo pasirese. . Iyo inovhara iyo yese yekutenderera kukosha cheni pasi peimwe denga.